IiBrits Zibuyile! Iinqwelomoya ezili-16 kwiVeki Ngoku phakathi kwe-UK neJamaica
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » IiBrits Zibuyile! Iinqwelomoya ezili-16 kwiVeki Ngoku phakathi kwe-UK neJamaica
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, u-Edmund Bartlett (r) uthatha inxaxheba kudliwano-ndlebe kunye ne-ankile yabo ye-CNN International, uRichard Quest, kumgangatho we-World Travel Market eLondon, e-United Kingdom, ngoMvulo, ngoNovemba 1. UBartlett kunye namaGosa aphezulu oKhenketho ase-UK. ukuthengisa ngogonyamelo indawo yokusingwa eJamaica kunye nokudibana naBaphathi abaPhezulu beenqwelomoya ezinkulu zase-UK, abakhenkethi, imibutho yokhenketho yamazwe ngamazwe kunye namajelo eendaba.
Umphathiswa wezoKhenketho eJamaica u-Edmund Bartlett izolo (ngoNovemba 1) uthe iJamaica iya kuthi kamva kule nyanga iqale ukufumana ubuncinci iinqwelomoya ezili-16 ngeveki zisuka e-United Kingdom, zibuyisela isiqithi kumthamo wezihlalo zenqwelomoya ezimalunga ne-100% njengoko amanani okhenketho elizwe ephinda ebuyela.
IJamaica ngoku inezinga elingaphantsi kwepesenti enye yosulelo lweCovid kwiResilient Corridor.
Ilizwe likwindlela eyomeleleyo yokukhula, kwaye uMphathiswa wezoKhenketho uyakholiswa yimpumelelo ukuza kuthi ga ngoku.
Isizwe sikulungele kwaye sikhuselekile ukwamkela iBrits kwakhona ngeeholide ezinokhetho olwandisiweyo lokubhabha.
Ngoku u-Bartlett use-United Kingdom (e-UK) kunye neqela elikwinqanaba eliphezulu leSebe lezoKhenketho kunye ne-Jamaica Tourist Board (JTB) ethatha inxaxheba kwi-World Travel Market, enye yemiboniso emikhulu yorhwebo lokhenketho kwihlabathi. UBartlett udityaniswe nguSihlalo we-JTB, uJohn Lynch; UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; Umcebisi oMkhulu kunye neQhinga lobuchule, uMphathiswa wezoKhenketho, uDelano Seiveright; kunye noMlawuli weNgingqi we-JTB wase-UK naseMntla Yurophu, u-Elizabeth Fox.
“Sibe nonxibelelwano oluhle kakhulu namaqabane ethu aphambili e-UK kwaye sibaqinisekisile ngokulungela iJamaica kubo kunye nokhuseleko lwethu njengendawo yokuya kuyo, ngesantya esingaphantsi kwepesenti enye yosulelo lweCovid kwiResilient Corridor. Ukongeza, ndonwabile ukubona umthamo wesihlalo senqwelomoya phakathi kwe-UK kunye Jameyikha malunga neepesenti ezili-100 zento eyayiyi-Covid xa sasikwindlela yokukhula eyomeleleyo. Sizimisele kakhulu malunga nentshukumo kunye neziphumo ezomeleleyo, kwaye ndiyavuya koko sikufezekisayo ukuza kuthi ga ngoku,” utshilo uBartlett.
Ngeli xesha, uDelano Seiveright waphawula ukuba "i-TUI, iBritish Airways kunye neVirgin Atlantic ziinqwelomoya ezintathu ezithwele abakhweli phakathi kwe-UK neJamaica kunye neTUI esebenza ngeenqwelomoya ezintandathu ngeveki, iVirgin Atlantic yonyuka ukuya kwiinqwelomoya ezintlanu ngeveki kunye neBritish Airways ukusebenza ezintlanu ngeveki. . Iinqwelomoya ziphuma eLondon Heathrow, eLondon Gatwick, eManchester naseBirmingham. Ngaphaya koko, sinokubona utshintsho olungakumbi kwishedyuli njengoko amaqela ethu eqhubeka neengxoxo nabachaphazelekayo bethu. ”
Uthethathethwano e-UK luzisa esiphelweni i-blitz yentengiso yehlabathi ekhokelwa nguBartlett kunye namagosa akhe aphezulu abandakanya iimakethi ezimbini ezinkulu zaseJamaica, i-United States neCanada, ezizuze impumelelo enkulu ekonyuseni ngokumangalisayo inqwelomoya ukuya esiqithini kunye nokuqinisekisa abachaphazelekayo Ukhuseleko olunxulumene neCovid kwindawo ekuyiwa kuyo. UMphathiswa ukwakhokele uthethathethwano eDubai, United Arab Emirates, naseRiyadh, eSaudi Arabia, oluya kuthi ngokuyinxenye lube nesiphumo sokuvulwa kokhenketho kunye amathuba otyalo-mali eJamaica.